चक्रवर्तीका विद्यार्थीमाथि खेलबाडको दोषी को ? पीडितलाई न्याय कसले, कसरी दिने ? – Health Post Nepal
२०७६ कार्तिक २० गते १९:३७
भक्तपुरस्थित चक्रवर्ती हबी एजुकेसनल एकेडेमीका नर्सिङका विद्यार्थी यतिवेला आफ्नो भविष्य खोज्दै भौँतारिरहेका छन् । कहिले शिक्षा मन्त्रालय, कहिले सिटिइभिटी त कहिले कलेजमा ३ महिनादेखि धाउँदा पनि उनीहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । आफ्नो आवाज कसैले नसुनेको भन्दै यतिवेला विद्यार्थी माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
चक्रवर्तीका विद्यार्थी २६ साउनका लागि तय भएको परीक्षामा सामेल हुन पाएनन् । उनीहरूको भविष्यमाथि कलेजले नराम्ररी खेलबाड गरेको छ । २ वर्षअघि नै कलेजलाई खोरेज गरिए पनि अदालतबाट स्टेअर्डर ल्याएर कलेजले विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको थियो । मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा कलेजको खारेजी सदर भएसँगै विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको हो । २ वर्षदेखिको समय, श्रम र पैसाको त बर्बादी भयो नै, विद्यार्थी आफ्नो मौलिक अधिकारबाट समेत वञ्चित हुन पुगे ।
कलेजले कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा भर्नाको विज्ञापन गरेपछि त्यसैका आधारमा आफू भर्ना भएको पीडित विद्यार्थी अनुष्का चौलागाईं बताउँछिन् । पहिलो वर्षको अध्ययन पूरा भएपछि फाइनल परीक्षा दिने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । तर, परीक्षाको अघिल्लो दिनसम्म पनि प्रवेशपत्र नआएपछि उनी छाँगाबाट खसेजस्तो भइन् ।
‘२६ साउनमा परीक्षा थियो, २५ गते प्रवेशपत्र लिन कलेज गयौँ,’ चौलागाईं भन्छिन्, ‘तर, कलेजबाट प्रवेशपत्र नआएको जवाफ आयो, त्यतिवेलै हामीले परीक्षा दिन पाउँदैनौँ कि भन्ने शंका लागेको थियो ।’ यद्यपि, विगतका वर्षहरूमा पनि परीक्षाको केही समयअघि प्रवेशपत्र आएर परीक्षा दिन गएको सिनियर दिदीहरूले बताएका कारण अनुष्काको मनमा केही आशा भने जीवितै थियो । ‘परीक्षाको दिन बिहानसम्म पनि प्रवेशपत्र आउँछ कि भन्ने झिनो आशा थियो, तर ५ बजे कलेज पुग्दा प्रवेशपत्र नआएको कलेज प्रशासनले बताएपछि हामी परीक्षाबाट वञ्चित भयौँ,’ उनले भनिन् ।
कलेजमा भर्ना हुँदा विद्यार्थीले ३ लाख ११ हजारका दरले शुल्क बुझाएका थिए । खारेजीको निर्णयपछि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै कलेजले रकम फिर्ता गरिरहेको छ । कुनै पनि तरिकाबाट सिटिइभिटीले पहिलो वर्षको परीक्षा लिइदेओस् र अर्को कुनै कलेजमा ट्रान्सफर भएर दोस्रो वर्षको अध्ययन गर्न पाइयोस् भन्ने माग विद्यार्थीको छ ।
वर्षौंको मिहिनेत अन्तिम अवस्थामा आएर शून्यमा परिणत हुँदा विद्यार्थीलाई सह्य हुने कुरै थिएन । ‘कलेजले नै हाम्रो भविष्यमाथि ठूलो खेलबाड गरेको प्रति कलेजदेखि रिस उठ्यो, आँखाबाट आँसु आयो, मन भारी भएर आयो, नर्स बनेर देशको जोसकेको सेवा गरेर देखाउने सपना कलेजले चक्नाचुर पारिदियो,’ अनुष्का भावुक हुँदै भन्छिन् ।
कलेजबाट ठगिएपछि विद्यार्थीले न्यायका लागि प्रयास नगरेका होइनन् । तर, उनीहरूको पीडाको सुनुवाइ कहीँ–कतैबाट भएन । उनीहरू नियामक निकाय सिटिइभिटीमा न्यायका लागि पुगे । त्यहाँ बुझ्दा २ वर्षअघि नै चक्रवर्तीलाई खारेज गरिएको रहेछ । ‘कलेजले अदालतबाट स्टेअर्डर ल्याएर विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको रहेछ,’ अर्की पीडित विद्यार्थी प्रेमिका शाही भन्छिन्, ‘त्यसपछि खनपिन नै छोडेर दिनप्रतिदिन सरकारका धेरै निकाय धाइराख्यौँ, तर कतैबाट पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’
कुनै पनि निकायबाट न्याय नपाएपछि प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीको एउटा मात्र माग छ– मौलिक हकबाट आफूलाई वञ्चित नगरियोस् । सकारात्मक रूपबाट नै समस्याको समाधान निकाल्न कलेजको निर्देशनअनुसार विद्यार्थी चलेका थिए । तर, ४ कात्तिकमा पाटन उच्च अदालतले कलेजलाई खारेज गरेको निर्णय गर्यो । ‘४ गतेसम्म चक्रवर्तीमा पढ्छौँ भन्न पाइथ्यो, तर कलेजको खोरजीसँगै त्यो नाम पनि रहेन,’ शाही भन्छिन्, ‘यतिवेला हामी यता न उताको बनाइएका छौँ ।’
सिटिइभिटीले पीडित विद्यार्थीलाई सुरुमा केही गर्न सकिने आश्वासन दिएको थियो । तर, हाल आएर कुनै निकाय विद्यर्थीको पीडा सुन्न तयार छैनन् । ‘देशको विकट ठाउँबाट पढ्नकै लागि ठूलो सपना बोकेर आएकी थिएँ,’ गहभरि आँसु बनाउँदै शाही भन्छिन्, ‘एर्कातर्फ पैसाको नाश भयो, अर्कोतर्फ भविष्यमाथि खेलबाड हुन पुगियो ।’
बुधबार माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका पीडित विद्यार्थीले सरकारलाई दबाब दिन नाराबाजी गरे । ‘शिक्षामन्त्रीज्यू ! हाम्रो कुरा सुन्नुहोस्, शैक्षिक माफिया मुर्दावाद, सरकार ! हामीले पढ्न नपाउने ? सिटिइभिटी र नर्सिङ काउन्सिल किन चुप ?’ लगायत नारासहित विद्यार्थीले प्रदर्शन गरे ।
आफ्नो पढ्न पाउने संवैधानिक हक हनन भएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको पीडित विद्यार्थीको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्रालय भने विद्यार्थीलाई आन्दोलनका लागि उचालेर कलेज सञ्चालकले पुनः सम्बन्धन लिने दाउ खेलिरहेको बझाइमा रहेको अधिकारीको भनाइ छ । यस्तोमा जताबाट पनि विद्यार्थी नै पीडित बनिरहेका छन् ।
Tags: चक्रवर्ती हबी एजुकेसनल एकेडेमी, नर्सिङ, परीक्षा